RA’IISAL WASAARAHA ITOOBIYA OO KA HADLAY QOONDADA SHIDAALKA AY SOOMAALIDU YEELANAYSO | Saxil News Network
RA’IISAL WASAARAHA ITOOBIYA OO KA HADLAY QOONDADA SHIDAALKA AY SOOMAALIDU YEELANAYSO
August 3, 2018 - Written by editor
Hargeysa(SAXILNEWS.com)-Ra’iisal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed ayaa markii ugu horeysay ka hadlay arrin aad loo hadal hayay oo ku saabsan qoondada dadka deegaanka Soomaalida ay ka helayaan shidaalka laga soo saaray deegaankaas.
Dr Abiy oo dad badan kula hadlayay gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka ayaa ka jawaabay su’aal ahayd “Dhinaca deegaanka soomalida Itoobiya waxaa la iga weydiiyey dad badan oo shacabka dambiya ka galay ay jira maxaad ka damacsan tihiin, oil and gas iyo arrinta deegaanka shidaalka laga helay iwm?”.
“Sababta oo ah kunkii sano ee la soo dhafay iyo 60 sano ee ugu dambeeysay ee shidaalkan la baadhayeyba shidaalkaas inu biya yahay inuu ciid yahay lama ogeyn.Hadda marka uu wixii uu shidaal noqday haddii aan dhahno dhulkeyga ayaa laga helay iyo waxyaaba noocaa natiijada ka dhalan karto waa inaan isleyno oo keli ah taana wax faa’ida ah malahan” ayuu intaasi ku daray ra’iisal wasaarahu.
Wuxuu Dr Abiy Sheegay in kheyraadka dhulka Itoobiya uu yahay mid dadka oo dhan ay leeyihiin, wuxuuna sheegay qoondada ay yeelan karaan dadka Soomaalida ee degan meelaha shidaalka laga heley, wuxuuna yidhi “Hase yeeshee, iyada oo aan deegaanka Soomaalida oo keli ah loo eegeyn kheyraad kasta oo dabiici ah oo laga helo deegaan kasta 5-10% waxa lagu hormarinayaa deeganka kheyraadka laga helay, arrintaasina waa mid caada u ah oo ay ku dhaqmaan waddama badan oo ka tirsan qaaraddan Afrika”.
Maxay qabaan madaxda Soomaalidu?
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ayaa hore uga hadlay qoondada uu deegaanka ku leeyahay shidaalka, wuxuuna yidhi “Su’aasha ay ka hadlayaan ee ay aad noo weeydiinayaan, waa imisa ayaan leenaya, wixiiba inaga ayaa lehe, imisa aan leenahay waa maxay?” ayuu yidhi madaxweynaha oo intaas ku daray “Sharci waxaa jira federaalka oo dhigaya in shidaal haddii uu soo boxo, ama xitaa kheyraad kale in deegaanka uu leeyahay boqolkiiba 40%, federaalkuna wuxuu leeyahay 60%, midda federaalka lafteeda ayaan wax ku leenahay”.
Sheekh Ibraahim Dheere oo ahaa guddoomiyihii jabhaddii hubeysnayd ee heshiis la gashay dowladda Itoobiya ayaa yidhi”waa in la xaddidaa qoondo la’isla ogyahay, sidoo kale dadka deegaanka waa in laga shaqo galiyaa mashruuca, hadda waa ku yaryihiin”. Wuxuu la hadlayay BBC-da
Sidoo kale afhayeen u hadlay jabhadda ONLF ayaa sheegay in ay ka hortagayaan in kheyraadkii iyo hantidii dadka lasoo saaro iyada oo aanan dadkii lahaa laga talogalinin, sida uu hadalka u dhigay, kana hortagi doonaan wax kasta oo ay ku qaadataba